China Air Multi- pistin Nkedo Machine factory na suppliers | Sofiq
A na-ejikarị igwe eji eme ihe maka ebe a na-eme ihe nkedo, usoro mmepụta ihe ma ọ bụ usoro mmepụta ihe nke ọma na nke dabara adaba maka ịmịpụta obere obere mpempe mpempe akwụkwọ na otu igbe igbe, igbe dị elu na igbe ala. ịpị Ọdịdị, na ịpị cylinder dum, na ịpị ike siri ike dị mma maka ịkpụzi àgwà, pneumatic anwụrụ mfe, mfe akara na mma.
A. Pneumatic multi-contact compaction nakweere iji bulie nhazi nke igwe, na-enweghị mmanụ mmanụ; agafeghị oke nrụgide, enweghị ihe ọpụrụiche achọrọ maka ájá, kọntaktị kọntaktị ọzọ (48pcs), dabara maka ịkpụzi mgbagwoju anya.
B. High compaction compaction, na multi-kọntaktị compacts aja ịkpụzi, na vaibret na-arụ ọrụ table (iche na igwe etiti, na etiti na-enweghị vibration). Ya mere, ọma vibration mmetụta, elu ekweghị ekwe na edo ájá ịkpụzi (nkezi ekweghị ekwe 85 ~ 90, B ụdị ekweghị ekwe tester), ájá oriri nwere ike dị ka obere ka 20 ~ 30 mm, na compaction ruru bụ ruo 4.2, na vetikal elu ekweghị ekwe nke ebu ebu ka nwere ike iru n'elu HB80.
C. Igwe ahụ na - ewepụta mmiri micro-vibration compaction spring, nnukwu compaction cylinder dayameta, ike nrụgide dị elu, compacted na ọbụna ájá ájá, ọ nwere ike ịkwado ịdị mma nke nkedo. Ebu na-agbatị usoro na-anabata ụzọ ikuku mmanụ ikuku, ebu ahụ na-agbatị. njikọ mkpanaka, ndị synchronous aro Ọdịdị, mgbali mmanụ ọsọ ọsọ ụkpụrụ, ezi ebu n'ịgba mmekọrịta, ọfiọkde mụ ịbịaru site abụọ na-eweli cylinders, na njikọ mkpara, na synchronous aro. Ngwongwo pneumatic dị mfe, ọrụ dị mfe ma na-agbanwe agbanwe, ọrụ dị mma, Igwe ahụ na-ejide mmiri mmiri zuru oke nke ikuku micro-vibration, enweghị ntọala pụrụ iche chọrọ.
D. Igwe ahụ na-eme ka ọnụọgụ nke mpịakọta kọmpụta ahụ, na-agbaso ọtụtụ usoro iji mee ka ike nrụgide dị elu, n'otu oge ahụ, ọ nwere ike ịpịgharị ma gbanye dịka mkpa ọ dị, nke mere na ịdị elu na ike ụgbọ elu nke ụdị ájá (gụnyere ụdị ụdị ájá dị mgbagwoju anya) dị kọmpat na ọbụna. Ọrụ dị mma na arụpụta dị elu.
E. Aja ebu mgbatị agbapụtara mkpa-mgbidi oge ọgbụgba, kpọmkwem size, ezigbo surface.h arụpụtaghị.
Nke gara aga: Static mgbali Nkedo Line
Osote: Static Pressure Automatic Nkedo Machine
Flask Nkedo, Sandbox, Flask akpụzi Machine, Ọkara Automatic Nkedo Machine, Nkedo Nkedo Flask, Punch Out igwe,